Sidee baan u beddeli kartaa, qabsato ama hagaajin Heerka video jir ah.
> Resource > Video > Sidee baan u beddeli karaa heerka Video ee jire ah?
Ka hor inta aadan bilaabin inaad la beddelo, la qabsadaan, hagaajin ama badalo heerka jir ah, waxaad u baahan tahay in laga war hayo hal dhibic oo ah heerka video jir dhabta ah soo bandhigay waxa ay inta badan ku xidhan tahay awoodda hardware your computer ee. Inkasta oo ay tahay wax caadi ah in la kordhiyo video tayo by kordhay heerka jir, taas oo ka shaqeyn doonaan oo kaliya ilaa dhibic gaar ah. Plus, waxaa jira wax in uu yimaado waa la sidoo taasoo weyn size file ah. Haddii aad diyaar u tahay in loogu badalo heerka video jir tahay, isku day inaad si ay ula qabsadaan heerka jir ah la Converter Wondershare Video Ultimate .
1 Si aad ula qabsadaan heerka jir video
Ka dib markii ay soo jiiday in aad video files ama xulashada oo video ah in aad rabto in aad beddesho heerka jir ah, click fudud on Settings badan fursadaha. Haddii aad haysato wax ka badan file a video oo aad jeclaan lahayd inaad la qabsato heerka jir ah, waxaad ku farxi doonaa inuu ogaado inaad iyaga oo dhan ma samayn karo hal mar, asal ahaan ku yaalla.
Waxaa jira mid noqoshada oo ka mid ah Edit button soo socda ee ku anfacaya idiin sidoo haddii ay jirto tafatirka kasta oo aad jeclaan lahayd in la sameeyo ka hor inta beddelo, la qabsado, qamaar ama diinta heerka video jir ah.
2 Heerka video jir Change
Haddii aad riix Video-jir ah Rate 's hoos-hoos menu, aad ka ogaan doonto in ay jiraan doorashada ah heerka jir in aad kala dooran karto oo leh xiddaayad ugu hooseeya halkii labaad (fps) 12 ugu badnaan 30fps arrin.
Haddii aad leedahay waayo-aragnimo hore oo labada badaneyso ama ay yaraaneyso heerka video jir ah, waxaa dhici karta inaad isku aragto doonaa in halkaas macquul ah oo halis tayada faylka video asalka ah ka dib markii diinta ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa gabi ahaanba waa AAN tayada khasaaro haddii aad doorato in aad la qabsato, hagaajin ama badalo heerka jir la Wondershare Video Converter Ultimate ah. Sidaas, waxaad doonaa aw in aanay jiri doonin arrimaha loo maqli karo ama dhacdooyin ku dheehan yahay ma maqal ah ee u dhigma oo aan goobta video ka dib markii aad badaley heerka jir ah.
Marka aad go'aan ku saabsan heerka qaab dhismeedka ku haboon, riix OK ka dibna ka badalo button.
3 badalo video files (ka dib markii ay heerka jir beddelo)
Iyadoo Converter isku badalayaan heerka jir ah oo aad video files ah, waxaad yeelan doontaa in ay aragto horumarka diinta sida soo bandhigay in shaashadda hoose. Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad iska joojin dhibic kasta inta lagu jiro qaab beddelidda haddii aad maskaxdaada beddesho. Hawlaha qaab beddelidda macno ahaan dhameeyo xitaa ka hor inta aad oga.
Bilow badan oo ku saabsan kala duwanaanshaha heerarka jir barashada!